လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ၀ိုင်းပယ်ခြင်းကို ခံရနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း (၆)ခု – Gentleman Magazine
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ၀ိုင်းပယ်ခြင်းကို ခံရနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း (၆)ခု
29/06/2017 29/06/2017 escapetravelmagazine
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ၀ိုင်းပယ်ခြင်းကို ခံရနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း (၆)ခု[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]
လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ ၀ိုငျးပယျခွငျးကို ခံရနိုငျသညျ့အကွောငျးရငျး (၆)ခု
သငျ့အနနေဲ့ အဖှဲ့အစညျးကွီးတဈခုထဲမှာ အလုပျလုပျနရေပမေယျ့ တဈယောကျတညျးဖွဈနသေလို့ ခံစားနရေပါသလား? ရုံးခနျးထဲမှာ ကိစ်စတဈခုခုရှိခဲ့ရငျ နောကျဆုံးမှသိရတဲ့သူဟာ သငျဖွဈနပေါသလား? သငျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ သငျ့ကို ၀ိုငျးပယျထားသလို ခံစားနရေပါသလား? ဒါဆိုရငျတော့ အခုဖျောပွမယျ့ အခကျြတှကေို ပွငျဆငျလိုကျပါ။
အလုပျထဲမှာ အမွဲတမျးလိုလို သုနျမှုနျပွီး စိတျအလိုမကဖြွဈနမေယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှအေတှကျ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အမူအယာမဟုတျပါဘူး။ တကယျတော့ လိုတာထကျပိုပွီး တညျနတောနဲ့ တဈဦးတညျးသီးခွားနတောက သငျ့ရဲ့အလုပျမှာ တိုးတကျမှုအလားအလာကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါက ခေါငျးဆောငျတဈယောကျရဲ့ အမူအကငျြ့လညျး မဟုတျပါဘူး။
၂။ ပွောစရာမရှိပွီးပွညျ့စုံနဖေို့ပဲ လုပျနတော
လုပျငနျးခှငျတဈခုမှာ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ မုနျးတဲ့အရာတဈခုကို ပွောပွပါဆိုရငျ တဈယောကျယောကျက အရမျးအလုပျတှေ ကွိုးစားပမျးစားလုပျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျလုပျရိုးလုပျစဉျအလုပျတှနေဲ့ အခြိနျမှနျပွီးစီးတာမြိုးက ပွဿနာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဘာအလုပျဖွဈဖွဈ အရမျးတကျကွှနတေတျပွီး တဈခြိနျလုံး ပွိုငျဆိုငျနသေလိုလုပျနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ ခဉျြလာမှာဖွဈပါတယျ။
စကားမြားလှနျးတာကလညျး လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ မနှဈသကျတဲ့အရာတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခွားဝနျထမျးတှရေဲ့ အလုပျစားပှဲကို သှားပွီး ညက သငျ့အိပျမကျထဲမှာ လဒေီဂါဂါနဲ့ တှတေဲ့အကွောငျးလိုမြိုး ဟိုဟိုဒီဒီလြှောကျပွောနမေယျဆိုရငျ သငျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့ သီးခွားလှတျလပျခှငျ့ကို ကြူးကြျောနသေလိုပါပဲ။ စကားနညျးနညျးပဲ ပွောပါ။ အရမျးပွောခငျြနတေယျဆိုရငျလညျး Facebook ပျေါမှာ တငျလိုကျပါ။
၄။ အခွခေံယဉျကြေးမှု မရှိတာ
လုပျငနျးခှငျထဲမှာ သငျ့ရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ ဘယျလိုပွုမူနထေိုငျတယျဆိုတာကို သတိထားမှတျသားထားပါ။ လုပျငနျးခှငျ ဒါမှမဟုတျ ရုံးခနျးဆိုတာ အတိအလငျးထုတျပွနျကွညောထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှေ ရှိတတျတဲ့နရောဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ လုပျငနျးခှငျနဲ့ လိုကျလြောညီထှဖွေဈအောငျ နတေတျ၊ ၀တျတတျ၊ စားတတျဖို့ လိုပါတယျ။ ဖွဈသလိုဝတျစားလာတာ၊ ခန်ဓာကိုယျအနံ့အသကျမကောငျးတာ၊ ကိုယျပိုငျနရောတဈလို နခေငျြသလိုနတောမြိုးတှကေ မလုပျသငျ့တဲ့အရာတှဖွေဈပါတယျ။
၅။ ပရျောဖကျရှငျနယျ မဆနျတာ
အလုပျကို မလေးစားတာ၊ အလုပျခြိနျကို အမွဲတမျးနောကျကတြာ၊ အခြိနျပိုဆငျးရတိုငျး မလာတာ၊ လိမျညာပွောဆိုတာ၊ အခွားသူတှရေဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ခှငျ့မတောငျးပဲ အသုံးပွုတာ၊ ခိုးယူတာ စတဲ့လုပျရပျတှကေ ပရျောဖကျရှငျနယျတဈယောကျရဲ့ လုပျရပျတှမေဟုတျပါဘူး။ လုပျငနျးခှငျမှာ အလုပျကို အလေးထား ဦးစားပေးတာ၊ ဘယျအရာကိုမဆို အစီအစဉျတကလြုပျတတျတာ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေို ကူညီပေးတာတှကေ သငျ့ကို ယုံကွညျခငျမငျမှုတိုးပှားလာစနေိုငျတဲ့ အပွုအမူတှဖွေဈပါတယျ။
၆။ အလုပျရှငျနဲ့ အရမျးရငျးနှီးလှနျးတာ
ဒီအခကျြက အဆိုးဆုံးပါ။ အလုပျရှငျနဲ့ သငျက အရမျးရငျးနှီးပွီး လုပျငနျးခှငျထဲက အကွောငျးအရာတှေ၊ သူတို့ရဲ့ လြို့ဝှကျခကျြတှကေို ပွနျသတငျးပို့တတျတယျလို့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှကေ သံသယရှိနမေယျဆိုရငျလညျး လဈလြူရှုခံရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကို ရှောငျနိုငျဖို့အတှကျကတော့ အလုပျထဲက အတငျးအဖငျြးစကားတှကေို မသိမကွားအောငျ နဖေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သင့်အနေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေသလို့ ခံစားနေရပါသလား? ရုံးခန်းထဲမှာ ကိစ္စတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် နောက်ဆုံးမှသိရတဲ့သူဟာ သင်ဖြစ်နေပါသလား? သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက သင့်ကို ၀ိုင်းပယ်ထားသလို ခံစားနေရပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေကို ပြင်ဆင်လိုက်ပါ။
အလုပ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းလိုလို သုန်မှုန်ပြီး စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အမူအယာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ လိုတာထက်ပိုပြီး တည်နေတာနဲ့ တစ်ဦးတည်းသီးခြားနေတာက သင့်ရဲ့အလုပ်မှာ တိုးတက်မှုအလားအလာကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
၂။ ပြောစရာမရှိပြီးပြည့်စုံနေဖို့ပဲ လုပ်နေတာ
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မုန်းတဲ့အရာတစ်ခုကို ပြောပြပါဆိုရင် တစ်ယောက်ယောက်က အရမ်းအလုပ်တွေ ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလုပ်တွေနဲ့ အချိန်မှန်ပြီးစီးတာမျိုးက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာအလုပ်ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းတက်ကြွနေတတ်ပြီး တစ်ချိန်လုံး ပြိုင်ဆိုင်နေသလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ချဉ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
စကားများလွန်းတာကလည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ မနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်စားပွဲကို သွားပြီး ညက သင့်အိပ်မက်ထဲမှာ လေဒီဂါဂါနဲ့ တွေ့တဲ့အကြောင်းလိုမျိုး ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုရင် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကျူးကျော်နေသလိုပါပဲ။ စကားနည်းနည်းပဲ ပြောပါ။ အရမ်းပြောချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း Facebook ပေါ်မှာ တင်လိုက်ပါ။
၄။ အခြေခံယဉ်ကျေးမှု မရှိတာ
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိထားမှတ်သားထားပါ။ လုပ်ငန်းခွင် ဒါမှမဟုတ် ရုံးခန်းဆိုတာ အတိအလင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိတတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင် လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေတတ်၊ ၀တ်တတ်၊ စားတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဖြစ်သလိုဝတ်စားလာတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အနံ့အသက်မကောင်းတာ၊ ကိုယ်ပိုင်နေရာတစ်လို နေချင်သလိုနေတာမျိုးတွေက မလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မဆန်တာ
အလုပ်ကို မလေးစားတာ၊ အလုပ်ချိန်ကို အမြဲတမ်းနောက်ကျတာ၊ အချိန်ပိုဆင်းရတိုင်း မလာတာ၊ လိမ်ညာပြောဆိုတာ၊ အခြားသူတွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ခွင့်မတောင်းပဲ အသုံးပြုတာ၊ ခိုးယူတာ စတဲ့လုပ်ရပ်တွေက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်ကို အလေးထား ဦးစားပေးတာ၊ ဘယ်အရာကိုမဆို အစီအစဉ်တကျလုပ်တတ်တာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ကူညီပေးတာတွေက သင့်ကို ယုံကြည်ခင်မင်မှုတိုးပွားလာစေနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။
၆။ အလုပ်ရှင်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးလွန်းတာ
ဒီအချက်က အဆိုးဆုံးပါ။ အလုပ်ရှင်နဲ့ သင်က အရမ်းရင်းနှီးပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အကြောင်းအရာတွေ၊ သူတို့ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို ပြန်သတင်းပို့တတ်တယ်လို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက သံသယရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်း လစ်လျူရှုခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ အလုပ်ထဲက အတင်းအဖျင်းစကားတွေကို မသိမကြားအောင် နေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous: စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည်တွေကို ရှောင်ကြင်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း (၄)ခု
Next: အနေဝေးပေမယ့် သွေးအေးမသွားစေဖို့